အားကစား နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Keep သည်ဟောင်ကောင် IPO အတွက် လျှောက် ထားသည် - Pandaily
Feb 28, 2022, 11:53မနက် 2022/02/28 14:16:10 Pandaily
အားကစား နည်းပညာ ကုမ္ပဏီKeep သည် အများပြည်သူ အတွက် လျှောက်လွှာ ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် တင်သွင်း ခဲ့သည်ဟောင်ကောင်တွင် Goldman Sachs နှင့် CICC တို့သည် ပူးတွဲ စပွန်ဆာ များဖြစ်သည်။
Keep ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ကြံ့ခိုင်ရေး ရည်မှန်း ချက်များကို လိုက်စား သူများအတွက် အွန်လိုင်း အားကစား အကြောင်းအရာ များကိုထောက်ပံ့ ရန် ကိရိယာ တစ်ခုအဖြစ် ကန ဦး သတ်မှတ် ခဲ့သည်။ 2018 ခုနှစ်တွင် Keep တဖြည်းဖြည်း အားကစား ထုတ်ကုန်, ကြော်ငြာ, အဖွဲ့ဝင် များနှင့် “Keepland” အပေါ် အာရုံစူးစိုက် အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မော်ဒယ် လေးခု ဖွဲ့စည်း, သုံးစွဲ သူများ၏ အစားအစာ, အဝတ်အစား နှင့် လေ့ကျင့် ရေး လိုအပ်ချက် များအတွက် တစ်နေရာ တည်း မှာ အားကစား ဖြေရှင်းချက် ပေး စတင်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ အလားအလာ များအရ Keep သည် ၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၂၀ တွင် ယွမ် ၆ ၆၃ သန်း (ဒေါ်လာ ၁၀၅ သန်း) နှင့် ယွမ် ၁. ၁၀၇ ဘီလီယံ အသီးသီး ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၏ပထမ သုံးလပတ်တွင် Keep သည် ဝင်ငွေ ယွမ် ၁. ၁၅၉ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၁. ၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။ တိုးတက်မှု သည်အဓိကအားဖြင့် ကိုယ်ပိုင် ကြံ့ခိုင်ရေး ထုတ်ကုန်များ၊ အသင်း ၀ င်များနှင့် အွန်လိုင်း မှ ပေးဆောင် ရသော အကြောင်းအရာ များမှ ၀ င်ငွေ တိုးလာ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
IFRS မဟုတ်သော တိုင်းတာ မှုအရ ကုမ္ပဏီ၏ အသားတင် အရှုံး သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ယွမ် ၃ ၆၆ သန်းမှ ၂၀၂၀ တွင် ယွမ် ၁၀၆ သန်း သို့ကျဆင်းသွားသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၏ပထမ သုံးလပတ်တွင် အသားတင် အရှုံး သည်ယွမ် ၆ ၉၆ သန်းအထိ တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ရေရှည် အမြတ်အစွန်း အပေါ် ယုံကြည်မှု မြင့်တက်လာ ခြင်းကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၏ပထမ သုံးလ ပတ်အတွင်း ကြော်ငြာ နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ကိုတိုးမြှင့် ခဲ့ကြောင်း ကုမ္ပဏီက ရှင်းပြခဲ့သည်။
Keep သည် ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ တွင် လစဉ် အသုံးပြုသူ ၂၉. ၇ သန်းနှင့် ၃၄. ၄ သန်း အသီးသီးရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Keep ၏ပျမ်းမျှ လစဉ်ကြေး ပေးသွင်း သူများသည် ၂၀၂၀ တွင် ၁. ၉ သန်းမှ ၃. ၃ သန်း သို့ တိုးလာပြီး အသင်း ၀ င် မှုနှုန်းသည် ၂၀၂၀ တွင် ၆. ၄% မှ ၂၀၂၁ တွင် ၉. ၅% သို့ တိုးလာခဲ့သည်။
တည် ထော င်ပြီး ခုနစ် နှစ် ခွဲ အကြာတွင် Keep သည်စုစုပေါင်း ဒေါ်လာသန်း ၆၀၀ အတွက် ရန်ပုံငွေ ရှစ် ကြိမ် ပြီးစီးခဲ့သည်။ IPO မတိုင်မီက Keep ကိုတည်ထောင် သူနှင့် စီအီးအို Wang Ning သည် ၁၈. ၆၁% ၊ ပူးတွဲ တည်ထောင်သူ Peng Wei ၊ Liu Dong နှင့် Wen Chunpeng တို့သည် ၂. ၂၆% ၊ ၁. ၁၈% နှင့် ၁. ၁၆% အသီးသီး ပိုင်ဆိုင် ကြောင်း အလားအလာ ကဖော်ပြသည်။ Jiyuan Capital သည် ၁၆. ၁၄% ၊ SoftBank က ၁၀. ၃၉% နှင့် ကျန် ၅၀. ၂၅% ကိုအခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Didi App ဖယ်ရှား ခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရ သောအခါ တရုတ် ကုမ္ပဏီများ Keep, Ximalaya နှင့် LinkDoc တို့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ သူတို့၏ IPO အစီအစဉ်များ ကိုဖျက်သိမ်း လိုက် သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ တရုတ် ရဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး ထုတ်ကုန် သုံးစွဲသူ သန်း ၃၀၀ ရှိပြီး ၂၀ ၂၆ ခုနှစ်မှာ သန်း ၄၂၀ အထိ ရှိလာ မယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားကြောင်း China Insights Consulting ရဲ့ အစီရင်ခံစာ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တွင်တရုတ် ကြံ့ခိုင်ရေး သုံးစွဲ သူများ၏ နှစ်စဉ် လူတစ် ဦး ချင်း အသုံးစရိတ် သည်ယွမ် ၂၅ ၉၆ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၏ ၁၄, ၂ ၆၈ ယွမ် ထက်များစွာ နိမ့်ကျသည်။ ၂၀၂၁ တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အွန်လိုင်း ကြံ့ခိုင်ရေး ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် Keep, လစဉ် တက်ကြွသော အသုံးပြု သူများနှင့် အသုံးပြုသူ လေ့ကျင့်ခန်း ကြာချိန် တွင်ပထမ နေရာတွင်ရှိသည်။
တရုတ် ကြံ့ခိုင်ရေး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Keep သည် IPO ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ပြီး ပြင်ဆင် နေသည်
တရုတ် ကြံ့ခိုင်ရေး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Keep သည် ထိရောက်မှု တိုးတက်စေရန် အကြီးစား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ခြင်းကို မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။